Nezvedu - Shenzhen FUXINGYE IMPORT & EXPORT CO., LTD
mukombe & usaucer
Forogo, Banga Nechipunu yakatarwa
Shenzhen FUXINGYE IMPORT & KUTENGA CO., LTD
Kambani yedu yakavambwa muna 1996, fekitori yakavakwa muna 2010, iri kuLonggang dunhu, Shenzhen, dunhu reGuangdong. Fekitori yedu inozivikanwa mukugadzira yakakwira kana yepakati giredhi ye porcelainware kana mabwe ewareware, zvakatipoteredza zvine hushamwari zvedongo.
Vanenge vashandi zana muhuwandu
Factory nzvimbo: 10,000 m²
Mwedzi kugadzirwa kugona: 1.5-1.8 miriyoni pc
Kutumira 60-70 midziyo pamwedzi
Kambani yedu & fekitori yakatobvumidza iyo DISNEY, BSCI, SEDEX uye Hunhu System Chitupa. ISO9000-2005. Zvichakadaro, isu tine simbi fekitori iyo iri JIEYANG, GUANGDONG dunhu. Tiri kupa akasiyana mwero wakazara uzere nesimbi yekucheka seti, kicheni chishandiso uye imwe isina Stainless simbi tafura.
Isu tinotsigira kupa vatengi nezvigadzirwa zvemhando yepamusoro, vanotevedzera musimboti wekugadzira kutanga, mhando yekutanga, nguva yekuendesa nenguva, kupa vatengi vepasirese zvinhu zvinogutsa nemasevhisi.
Panguva imwecheteyo, isu tine rakasimba dhizaina timu.
Iko kune mana nyanzvi vagadziri mukambani medu. Zvichakadaro, iyo chikamu chenguva dhizaini kubva kune ese epasi senge France, Austral, Italy, Turkey, Hong Kong zvichingodaro. Yese mwedzi miviri tichaburitsa kanokwana makumi maviri matsva dhizaini yemusika wakasiyana. Kubva pane edu akasimba magadzirirwo kugona, isu tinogara tichitungamira maitiro. Ndokusaka vatengi vemhando yepamusoro vazhinji vachishandira pamwe nesu.
Pane akati wandei mutengi anovimba nesu kwenguva yakareba kubva kuEurope, USA, Australia, East-Asia, Turkey, Dubai, Russia zvichingodaro. Isu tinopa 1 nhanho sevhisi kune avo vatengi. Kubva kune dhizaini kusvika kumasampuli, odha simbisa kutumira kana kusanganisa zvinhu zvakasiyana mudura redu. Isu tinopa hushamwari uye hwakadzama sevhisi.
Mafekitori edu atopfuudza iyo yepamusoro kutonga system ISO9000-2005. Isu tiri kutevera iwo mwero zvakanyatsoitirwa kuitira kuve nechokwadi chega chigadzirwa chigadzirwa pane yakanaka mamiriro.
Isu tinozvinamatira mukugadzira zvinhu zvinowedzera uye zvakawedzera kune mutengi wedu wese nemutengo wakakosha uye nebasa rakanakisa.
Hupenyu hwekugadzira hunhu!
903,9th pasi, Kuvaka A4, LiLang International Zvishongo Industrial park, BuLan Rd, Nanwan Street, LongGang, ShenZhen China
Iko pfupa china tafura yemwenje yakajeka kwazvo ku ...
Ndezvipi zviri nani, chena porcelain kana nyowani b ...
Ndeupi musiyano uripo pakati peeramiki a ...